हत्याका पाँच फरारआरोपित पक्राउ
News Category 2078/04/05
राजविराज, ४ साउन ।
दुई पक्षबीच भएको कुटपिटका क्रममा एकको मृत्यु भएपछि घटनामा संलग्न रहेका पाँच जना फरार आरोपिलाई सप्तरी प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरुमा जिल्लाको खडक नगरपालिका ९ बस्ने ३२ वर्षिय नजबुल मियाँ, ५५ वर्षिय मो. कालिस मियाँ, ६० वर्षिय रफुवा मियाँ, ४२ वर्षिय इजराइल मियाँ र ३२ वर्षिय मो. जाकिर छन् ।
उनीहरुलाई जिल्लाकै बोदेबरसाइन नगरपालिका ९ स्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका डिएसपी माधव प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिएका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरका प्रहरी निरिक्षक उमाशंकर प्रसाद साह, इलाका प्रहरी कार्यालय कडरबोनाका प्रहरी निरिक्षक बिरेन्द्र पासवान र इलाका प्रहरी कार्यालय भेडियाका प्रहरी नायब निरिक्षक सागिर राइनको कमाण्डमा खटेको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दाउद एक म्यानपावर कम्पनिका लागि बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने एजेन्टको काम गर्दै आएका थिए । भने अनुसारको काम नपाएको तथा विदेशमा आफन्त विचल्लीमा परेको भन्दै कुटपिट गर्दा दाउदको ज्यान गएको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको प्रहरीको भनाई छ ।
प्रहरीका अनुसार गत असार २४ गते राती १० बजेतिर आरोपितहरुले लाठी, फटालगायतका घरेलु हतियारले आक्रमण गरि दाउदलाई घाइते बनाई फरार भएका थिए । सोही राती उनको राजविराजस्थित छिन्नमस्ता अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
यता पक्राउ परेकाहरुलाई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गराई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ ।